Dagaalka Armenia iyo Azerbaijan oo inuu dib u bilowday | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Dagaalka Armenia iyo Azerbaijan oo inuu dib u bilowday
Waxaa jira warbixino sheegaya dagaal cusub oo udhaxeeya Armenia iyo Azerbaijan, saacado un kadib markii xabad joojinta dhaqan gashay.
Qaraxyo ayaa ku dhuftay Stepanakert, oo ah caasimada gobolka lagu muransan yahay Nagorno-Karabakh, fiidnimadii Sabtida, sida ay sheegeen goobjoogayaal iyo warbaahinta Armenia.
Labada dhinacba ayaa midba mid kale horay ugu eedeyay inuu sii wado duqeymaha.
Kadib dagaal labo toddobaad socday, labada dal waxay ku heshiiyeen xabbad-joojin ku-meel-gaadh ah intii lagu guda jiray wadahadalkii Moscow ka dhacay Jimcihii.
Madaxa siyaasadda arrimaha dibedda ee Midowga Yurub Josep Borrell ayaa sheegay in “waxaa sii kordhaya walaaca laga qaba warbixinnada ku saabsan dhaqdhaqaaqyada militariga ee sii socda, oo ay ku jiraan bartilmaameedyada rayidka, iyo sidoo kale khasaaraha dadka rayidka ah” in kasta oo heshiiska lagu xusay”, sida lagu sheegay bayaan la sii daayay Axaddii.
Hogaamiyaha gobolka Nagorno-Karabakh, Arayik Harutyunyan, ayaa u sheegay wakaalada wararka ee AFP in xaalada ay “dagantahay” axadii laakiin waxa uu ka digay in xabad joojinta ay xilli kasto burburikarto.
Dhisme dabaq ah oo ku yaal magaalada Azerbaijan ee Ganja ayaa la burburiyay habeenimadii taas oo saraakiishu ku sheegeen inuu ku dhacay gantaal laga soo riday Armenia. Saraakiisha ayaa sheegaya in toddobo qof ay dhinteen tobaneeyo kalena ay dhaawacmeen balse Armenia ayaa gaashaanka u daruurtay wararka sheegaya in gantaalka uu ka yimid dhineceeda.
Xabad joojinta oo haatan caga badan ku taagnayn ayay ahayd in labada dal loo oggolaado in ay is dhaafsadaan maxaabiista iyo in la kala gurto meydadka dagaalladii ugu dambeeyay.
Dhanka kale gabadha caanka ah ee reer Mareykan Kim Kardashian West, oo asal ahaan ka soo jeeda Armenia, ayaa baraha bulshada ku shaacisay inay u deeqeyso lacag dhan $ 1m oo doolar oo loogu tala galay dadka Armenia ee ku waxyeeloobay dagaalada.
Sidee xabad joojintu ku timid?
Waxaa la isku raacay kadib wadahadalo 10 saacadood qaatay oo ka dhacay caasimada Ruushka ee Moscow. Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Ruushka Sergei Lavrov ayaa sheegay in labada dal ay hadda bilaabi doonaan wada hadalo “wax ku ool ah”.
Sikastaba, Wasiirka Arimaha Dibada ee Armenia Zohrab Mnatsakanyan ayaa markii dambe ku tilmaamay wadahadalada mid aad u adag waxuuna sheegay in Armenia ay dooneyso in Nagorno-Karabakh loo aqoonsado caalamka in ay tahay dal madax banaan.
Dhanka kale Wasiirka Arimaha Dibada ee Azeri Jeyhun Bayramov ayaa sheegay in cadaadis ku filan aan la saarin Armenia intii ay socdeen wadahadalada, xaalada Nagorno-Karabakhna aysan sii ahaan karin sidii ay ahayd.
Waxaa la filayaa in Azerbaijan ay gacanta ku dhigto dhul badan, xabad joojintuna waxay socon doontaa oo kaliya inta Laanqeyrta Cas ay ku diyaarineyso meydadka la doonayo in labada dal ay isweydaarsadaan.
Turkiga, oo taageera Azerbaijan, ayaa sheegay in xabbad joojintu Armenia u tahay “fursaddii ugu dambeysay” ee ay ciidamadeeda ugala baxdo dhulka lagu muransan yahay.
Wasaaradda difaaca ee Armenia ayaa sheegtay in xoogagga Azeri ay weerar qaadeen shan daqiiqo kadib markii xabad joojinta la rabay in ay dhaqan gasho, iyadoo ay ka jawaabeen ciidamada qowmiyadaha Armenia. Ciidamada Azeri ayaa sidoo kale duqeynayay magaalo, sida ay sheegtay wasaarada difaaca.
Dhanka kale wasaaradda gaashaandhigga ee Azerbaijan ayaa sheegtay in Armenia ay “si bareer ah u jabineyso nidaamka xabad joojinta” oo ay rasaas ku ridayaan gobollada Azeri ee Terter iyo Agdam, balse Armenia waa ay beenisay arrintaas.
Sidoo kale xabad joojinta ayaa waxaa jiray guluf xooggan oo dhexmaray labada dal. Masuuliyiinta Nagorno-Karabakh ayaa sheegay in Azerbaijan ay gantaalo ku garaacday xaafadaha rayidka ee magaalada weyn ee Stepanakert, halka Armenia ay ku eedeysay ciidamada Azeri inay sii xoojinayaan weerarada diyaaradaha aan duuliyaha laheyn.
Raysal wasaaraha Armenia Nikol Pashinyan oo la hadlay BBC horaantii todobaadkan wuxuu ka digay “xasuuq” ka dhaca gobolka.
Isku dhacyada ayaa barakiciyay kala bar dadka Nagorno-Karabakh – oo qiyaastii ah 70,000 oo qof – ayay saraakiishu sheegeen.
Previous articleHay`adda Qaramada Midoobay oo sheegtay in sagaal milyan oo dadka reer Suudaan ah ay u baahan yihiin gargaar
Next articleMadaxweynaha Ereteriya oo Goordhowayd gaaray Addis Ababa